Sidee tusaaluhu ugu dhisan yihiin GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Inbadan oo naga mid ah waxay barteen isticmaalka kombuyuutarka oo ay ugu mahad celinayaan nooc ka mid ah Windows-ka. Mid ka mid ah xirfadaha ugu horreeya ee ay na barayaan (ama uguyaraan taasi waa sida ay aniga igu dhacday) waa in aan maareeyo macluumaadkayaga ku jira qalabkeenna, ha ahaato dariiqa adag ama warbaahinta laga saari karo (Weli waxaan xusuustaa macallimiintaydii qaadaysay imtixaannada ku saabsan sida loo guuro nuqul, abuur, abaabulo oo hel faylalka iyo faylalka ku dhex jira nidaamka, raggaasi runti way ku cuslaayeen maareeyaha faylka ee Win 3.1 XD).
Markan waxaan arki doonaa sida kala sarreynta galka ee GNU / Linux. Waa runtaa in daruuri aan daruuri ahayn in la ogaado 100%, laakiin i aamin inaad noloshaada wax badan ka fududayn doonto inaad fikrad ka haysato;).
Waxaan ugu tala galay maqaalkan in aan ugu adeego ujeedada laba-geesoodka ah ee ah hage deg deg ah, iyo sidoo kale inaan noqdo hage tixraac tixraaca mustaqbalka. Tan awgeed, macluumaadka aan aaminsanahay, ayaa ka sii badan "Takhasus leh" waxay ku jirtaa midab aad u hooseeya si loo tijaabiyo loona fududeeyo akhriska degdegga ah.
Qaab-dhismeedka guud ee buug-yaraha
Nidaamka faylka ee UNIX (iyo wixii la mid ah, sida GNU / Linux), waxaa jira dhowr hoosaadyo hoosaadyo ah oo leh nidaamyo badan oo kala duwan oo keyd ah iyo habeyn ah. Tusahaani waxaa loo kala saari karaa:
<° Ma guurto ah: Waxay ka kooban tahay feylal aan isbeddeleynin faragelinta maamulka (xididka), hase yeeshe, waxaa akhrin kara isticmaale kasta oo kale. (/ bin, / sbin, / doorashada, / boot, / usr / bin...)
<° Dhaqdhaqaaqa: Waxay ka kooban tahay faylal la beddeli karo, waana la aqrin karaa oo la qori karaa (qaar koodna adeegsadahooda iyo xididkiisa). Waxay ka kooban yihiin dejin, dukumiinti, iwm. (/ var / boostada, / var / spool, / var / orod, / var / quful, / guriga...)
<° Wadaag: Waxay ka kooban tahay faylal laga heli karo hal kombiyuutar oo loo isticmaali karo mid kale, ama xitaa la wadaagi karo dadka isticmaala.
<° Xaddidan: Waxay ka kooban tahay faylal aan la wadaagi karin, kaliya waxaa wax ka beddeli kara maamulka. (/ iwm, / boot, / var / orod, / var / quful...)
xidid: waa magaca caadiga ah ee koontada isticmaalaha oo leh dhammaan xuquuqda dhammaan noocyada (hal ama dhowr isticmaale). Root sidoo kale waxaa loo yaqaan superuser. Caadi ahaan kani waa koontada maamulka. Isticmaalaha aasaasiga ah wuxuu sameyn karaa waxyaabo badan oo uusan isticmaaleyaashu caadi aheyn, sida bedelida milkiilayaasha faylasha ama rukhsadaha oo ay ku xirmaan dekado tiro yar. Laguguma talin inaad u isticmaasho isticmaalaha xididka kal-fadhi fudud oo isticmaalka caadiga ah, maxaa yeelay waxay khatar gelineysaa nidaamka iyadoo damaanad qaadeysa helitaanka mudnaanta barnaamij kasta oo socda. Waxaa la doorbidaa in la isticmaalo koontada isticmaale ee caadiga ah oo loo isticmaalo amarka su si loo helo mudnaanta xididka haddii loo baahdo.
Qaab dhismeedkan waxaa lagu metelaa qaab geed, sida ku cad sawirka soo socda:
meesha xididka geedka/) waa saldhigga guud ee qaabdhismeedka buugga iyo laamaha (tusaha iyo faylasha) ka kac ama ka laadlaada saldhiga la sheegay.
1 Qaab dhismeedka geedka buugga ee GNU / Linux
2 Tilmaanta qaabdhismeedka geedka buugga
Qaab dhismeedka geedka buugga ee GNU / Linux
Qeybinta qaar ka mid ah Linux waxay wax ka bedel ku sameysaa qaab dhismeedka geedka buugga, si ay ugu haboonaato baahidooda. Sikastaba heerka waa kan soo socda:
Sidan ayey u egtahay kumbuyuutarkayga (xitaa shaashadaha shaashadaha waxaan ka tarjumayaa ruuxayga birta ah ee XD):
Ku-filnaanshaha go'doominta oo aan ku quusinno mawduuca ...
Sharaxaadda eqaabdhismeedka geedka
<° / (xididka): La mid ah galka xididka "C: \_”Ee DOS iyo nidaamyada Windows ka hawlgala. Waa heerka ugu sarreeya ee kala-sarreynta galka, waa weelka nidaamka oo dhan (marin u helka nidaamka feylka, oo ay ku jiraan saxannada laga saari karo [CD-yada, DVD-yada, qalinka, iwm.)).
<° / bin (binary): Binaries waa kuwa fuliya Linux (la mid ah faylasha .exe Windows). Halkaan waxaan ku lahaan doonnaa fuliyayaal barnaamijyada u gaarka ah nidaamka qalliinka.
<° / boot (boot): Halkan waxaan ka helnaa faylasha loo baahan yahay si loo bilaabo Linux, faylasha qaabeynta bootloader (Grub - Lilo), xitaa midkiisa Kernel nidaamka.
Kabaha kabaha: waa barnaamij fudud (oo aan lahayn dhammaan howlaha nidaamka hawlgalka) oo si gaar ah loogu talagalay in lagu diyaariyo wax kasta oo nidaamka hawlgalku u baahan yahay inuu shaqeeyo.
Xudunta ama iniirka: waa software-ka qaybta ugu muhiimsan nidaamka qalliinka. Waa qofka ugu weyn ee mas'uulka ka ah bixinta barnaamijyada kala duwan ee helitaanka aaminka ah ee qalabka kombiyuutarka ama qaab aasaasi ah, wuxuu mas'uul ka yahay maareynta ilaha, iyada oo loo marayo adeegyada wicitaanka nidaamka.
<° / dev (aalado): Faylkan waxaa ku jira aalado nidaam ah, xitaa kuwa aan loo dirin (dusha) buugga, tusaale makarafoonnada, madbacadaha, qalabka qalinka (ulaha USB) iyo qalab gaar ah (tusaale ahaan, / dev / null). Linux waxay ula dhaqantaa aaladaha sidii inay yihiin hal feyl oo kale si loo fududeeyo qulqulka macluumaadka.
/ dev / qalab null ama null (null peripheral): waa feyl gaar ah oo tuuraya dhammaan macluumaadka ku qoran ama dib loogu soo wareejiyo. Taa baddalkeeda, ma siinayo wax xog ah geeddi-socod kasta oo isku dayaya inuu ka akhriyo, si fudud ugu soo celinta EOF ama dhammaadka faylka. Habka ugu badan ee la isticmaalo waa dib u habeyn, maaddaama / dev / null uu yahay feylal gaar ah oo aan ahayn buugga; sidaa darteed, ma dhaqaaqi kartid (mv) ama nuqul kama sameyn kartid (cp) faylasha gudaha.
<° / iwm (iwm): Faylasha qaabeynta ee barnaamijyada la rakibay ayaa lagu keydiyaa halkan, iyo sidoo kale qoraallo gaar ah oo lagu fuliyo bilowga nidaamka. Qiyamyada faylalka qaabeynta waxaa lagu buuxin karaa ama lagu beddeli karaa faylasha qaabeynta isticmaaleyaasha oo mid kastaaba ku leeyahay meeshiisa “guriga” (galka shaqsiyeed)
/ iwm / opt / Faylasha qaabeynta ee barnaamijyada lagu marti geliyey galka gudihiisa / doorashada.
/ iwm / X11 / Faylasha qaabeynta ee Nidaamka Daaqada X, nooca 11.
X: Waxay mas'uul ka tahay soo bandhigida macluumaadka garaafka oo gebi ahaanba ka madax bannaan nidaamka hawlgalka.
/ iwm / sgml / Faylasha qaabeynta ee SGML.
Luqadda SGML: Waxay ka kooban tahay nidaam loogu talagalay abaabulka iyo calaamadeynta dukumiintiyada. Waxaa loo isticmaalaa in lagu caddeeyo sharciyada calaamadeynta dukumiintiyada mana ku soo rogo waxyaabo gaar ah oo loo dejiyo.
/ iwm / xml / Faylasha qaabeynta ee XML.
XML: Waa metalanguage tag ah oo la beddeli karo oo ay soo diyaarisay World Wide Web Consortium (W3C). Waa fududeyn iyo la qabsi SGML ah. Way fududahay in la hirgeliyo maadaama ay ka hortageyso qaar ka mid ah astaamaha SGML ee horumarsan.
<° / guri (guri): Halkan waxaa ah faylasha qaabeynta isticmaaleyaasha iyo sidoo kale feylasha shaqsiyadeed ee qofka (dukumiintiyada, muusikada, fiidiyowyada, iwm.), Marka laga reebo superuser (maamule, xidid) kaas oo leh tusaal gooni ah. La mid ah "Dukumintiyadayda" Windows-ka.
<° / lib (maktabadaha): Waxay ka kooban tahay maktabadaha lagama maarmaanka ah ee la wadaago (oo aan si fiican loogu aqoon maktabadaha) ee barnaamijyada la martigeliyay, taas oo ah, labada nooc ee / bin / y / sbin /, maktabadaha kernel, iyo sidoo kale modules iyo wadayaasha.
<° / celcelis (macnaheedu / macnaheedu yahay): Waxay ka kooban tahay qodobbada sii kordhaya ee warbaahinta keydinta laga saari karo, sida akhristayaasha CD-ROM-ka, Pendrives (xusuusta USB), xitaa waxay u adeegtaa in lagu dhejiyo qaybo kale oo isla disk adag ah, sida qayb ahaan loo isticmaalo nidaam kale. shaqeynaya.
<° / mnt (fuulid): Diiwaankan waxaa sida caadiga ah loo isticmaalaa rakibida ku meelgaarka ah Waa tusaha la midka ah / warbaahinta, laakiin waxaa badanaa isticmaala isticmaalayaasha. Waxaa loo isticmaalaa in si ku meelgaar ah loogu dhajiyo darawalada adag iyo qoruhu nidaamka; uma baahnid lambar sir ah, oo ka duwan buugga / warbaahinta.
<° / opt (ikhtiyaar) Waxay ka kooban tahay xirmooyinka barnaamijka ikhtiyaariga ah ee loogu talagalay codsiyada joogtada ah, taas oo ah, way wadaagi karaan dadka isticmaala. Barnaamijyadan kuma keydinayaan dejintooda buuggan; habkan, isticmaale kastaa wuxuu yeelan karaa qaab kale oo isku mid ah oo codsi ah, sidaa darteed arjiga waa la wadaagayaa laakiin ma ahan qaabeynta isticmaalaha, kuwaas oo lagu keydiyay galkoodu / guriga.
<° / proc (hababka): Badanaa waxay ka kooban tahay faylal qoraal ah, nidaamyo faylal dalwad ah oo dukumintiga dhigaya iyo heerka ay marayaan geeddi-socodka faylalka qoraalka ah (tusaale ahaan wakhtiga shaqada, shabakadda)
<° / xidid (maamule): Waa guriga / maamulka maamulka (asaga kaliya). Waa tan kaliya / guriga taas oo aan ku jirin -sabeex ahaan-tusaha kor ku xusan.
<° / sbin (nidaamka binaries): Nidaam binary gaar ah, amarro iyo barnaamijyo u gaar ah superuser (xididka), tusaale ahaan gudaha, dariiqa, ifup, sida buurta, umount, xiritaanka). Isticmaaluhu wuu wadi karaa mid ka mid ah codsiyada amarradan, haddii ay haystaan ​​rukhsad ku filan, ama haddii ay leeyihiin lambarka sirta ah.
<° / srv (adeegyo): Macluumaadka nidaamka ee ku saabsan adeegyada qaarkood ee ay bixiso (FTP, HTTP ...).
<° / tmp (ku meel gaar ah): Waa buug hage ah halka faylasha ku meel gaarka ah lagu kaydiyo (tusaale ahaan: biraawsarka internetka). Mar kasta oo nidaamka la bilaabo tusahan waa la nadiifiyaa.
<° / usr (isticmaaleyaasha): Kala sareynta sare ee xogta isticmaalaha; waxaa ku jira inta badan yutiilitida iyo codsiyada isticmaale-yaasha badan, taas oo ah, inay heli karaan dhammaan isticmaaleyaasha. Si kale haddii loo dhigo, waxay ka kooban tahay faylal la wadaago, hase yeeshee si kastaba loo akhriyi karo oo keliya. Buuggan waxaa xitaa lala wadaagi karaa kombuyuutarrada kale ee shabakadda maxalliga ah.
/ usr / bin: Set of executable (maamul la'aan dhammaan isticmaaleyaasha) inta badan barnaamijyada desktop-ka iyo kuwa kaleba (tusaale ahaan Firefox). Iyagu waa kuwo akhrin kara oo keliya, laakiin waxay lahaan karaan nidaamyo u gaar ah isticmaale kasta oo guriga / guriga ku jira. Qaar la fulin karo waxay wadaagaan maktabado isku mid ah oo codsiyada kale ay wadaagaan, marka guud ahaan ma jiraan laba maktabado isku mid ah oo isku nidaam ah, kaas oo keydiya xusuusta isla markaana siiya amar dheeraad ah.
/ usr / ku dar: Diiwaanka cinwaanka cinwaanka C iyo C ++.
/ Usr / V: Maktabadaha C iyo C ++.
/ usr / degaanka: Waa heer kale oo gudaha ah oo bixiya kala-sarrayn la mid ah buugga laftiisa / usr.
/ usr / sbin: Nidaamka binary ee aan muhiimka ahayn; tusaale ahaan, daemons ee adeegyada shabakadaha kala duwan. Taasi waa, waxay ka kooban tahay barnaamijyo aan bixinaynin adeegsade isticmaale guud ahaanna ku shaqeeya bilowga nidaamka ama duruufaha qaarkood. Si toos ah uma maamuli karaan isticmaaleha inta ay socdaan, in kasta oo iyaga la qaabeyn karo ka hor intaan la socodsiin.
/ usr / share: Faylasha la wadaago sida faylasha qaabeynta, sawirada, astaamaha, mowduucyada, iwm.
/ usr / src: Koodhadhka isha ee codsiyada qaar iyo kernel-ka Linux. Like / mnt, galkaan waxaa si toos ah u maareeya dadka isticmaala si ay ugu keydin karaan koodhka ilaha barnaamijyada iyo maktabadaha oo markaa si fudud ayey ku heli karaan, dhibaato la'aan ogolaanshaha. Waxay u oggolaaneysaa koodhka ilaha inuu lahaado boos u gaar ah, oo la heli karo laakiin ka fog dhammaan isticmaaleyaasha.
/ usr / X11R6 / X Nidaamka Daaqadda, Nooca 11aad, Siidaynta 6. Tusahaani wuxuu la xiriiraa deegaanka garaafka.
<° / var (doorsoomayaasha): Faylasha la beddeli karo, sida diiwaanada, faylalka galka, keydka macluumaadka, faylasha e-maylka ee ku meel gaarka ah, iyo faylasha ku meel gaarka ah guud ahaan. Waxay guud ahaan u shaqeysaa sidii diiwaanka nidaamka. Caawinta helitaanka asalka dhibaatada.
/ var / khasnado: Codsiyada khasnado, in kasta oo tusaha / tmp sidoo kale loo isticmaalo isla.
/ var / shil Xogta iyo macluumaadka waa la xareeyaa, iyadoo loola jeedo shilalka ama khaladaadka nidaamka qalliinka. Waa ka sii cayiman yahay / var guud ahaan
/ var / kulan / Xogta isbeddelka ah ee ciyaaraha nidaamka. Tilmaamuhu muhiim maahan waxaana badanaa laga tagaa codsiyada ciyaarta laftooda, maadaama ay u isticmaalayaan galka isticmaalaha / guriga si loo kaydiyo xogta isbeddelada sida qaabeynta, tusaale ahaan. Sikastaba, ciyaaraha gnome waxay adeegsadaan tusahan.
/ var / lib: Macluumaadka ku saabsan xaalada codsiyada hada, waxaa wax ka badali kara codsiyada laftooda.
/ var / quful: Faylal xaqiijinaya in kheyraadka ay adeegsadaan oo keliya codsi gaar ah oo codsaday in laga reebo, illaa la sii daayo.
/ var / log: Waa mid ka mid ah hoosaadyada ugu muhiimsan tan iyo markii dhammaan noocyada diiwaanada nidaamka lagu keydiyo halkan.
/ var / boostada: Boostada ama farriimaha isticmaalayaasha. Haddii aadan isticmaalin sirta, markaa galka shaqsiyadeed guud ahaan waxaa loo isticmaalaa isla shaqada barnaamijyada gacanta ku haya emaylka.
/ var / opt: Xogta ay adeegsadaan baakadaha ku keydsan / doorashada.
/ var / orod: Xogtii ugu dambeysay. Waxay ku shaqeysaa hawlgalka nidaamka illaa boot-ka ugu dambeeya. Tusaale ahaan, isticmaaleyaasha hadda diiwaangashan ama diiwaangashan, ee soo galay; iyo jinka ordaya.
/ var / spool: Hawlaha sugaya in laga shaqeeyo (tusaale ahaan, safafka daabacan iyo waraaqaha aan la aqrin).
/ var / tmp: Faylal ku meel gaar ah oo, ka duwan / tmpLooma tirtirin inta udhaxeysa kalfadhiyada ama nidaamka dib loo bilaabayo, laakiin si kastaba ha noqotee waa la kala diri karaa.
<° / sys (nidaam): Waxay kakoobantahay xuduudaha iskuxirka nidaamka socodsiinta. Xogta tilmaamaysa kernel-ka, baska, aaladaha, qalabka lagu ciyaaro, fs (faylasha faylasha) iyo kuwa kale.
<° / lumay + la helay: Nidaamyada Unix, mid kasta oo ka mid ah qaybaha / faylasha wuxuu leeyahay tusaha loo yaqaan / lumay + la helay taas oo faylalka iyo buuggaagta (ama hadhaagii iyaga ka mid ah) ay soo kabteen ka dib markii dib loo eegay nidaamka faylasha iyada oo loo marayo aaladda fsck lagu kaydiyo, waxaas oo dhan badanaa waxaa sababa shilalka nidaamka, xirnaanshaha khasabka ah ee kombiyuutarka, koronto la'aanta, iwm
Dhammaan feylashaas iyo diiwaankaas ayaa soo kabsaday kadib fsck waxaa lagu kaydiyaa qaab-dhismeedka soo socda galka / lumay + la helay, feyl walba magaciisa waa nambarka furaha:
drwxr-xr-x 3 xididka xididka 4096 2010-03-12 09:38 # 123805
drwxr-xr-x 3 xididka xididka 4096 2010-03-12 09:38 # 125488
drwxr-xr-x 3 xididka xididka 4096 2010-03-12 09:38 # 135836
-rw-r - r - 2 xididka xididka 2473 2010-03-02 16:03 # 137864
-rw-r - r - 2 xididka xididka 18505 2010-03-02 16:03 # 137865
-rw-r - r - 2 xididka xididka 56140 2010-03-02 16:03 # 137866
-rw-r - r - 2 xididka xididka 25978 2010-03-02 16:03 # 137867
-rw-r - r - 2 xididka xididka 16247 2010-03-02 16:03 # 137868
-rw-r - r - 2 xididka xididka 138001 2010-03-02 16:03 # 137869
-rw-r - r - 2 xididka xididka 63623 2010-03-02 16:03 # 137870
-rw-r - r - 2 xididka xididka 34032 2010-03-02 16:03 # 137871
-rw-r - r - 2 xididka xididka 2536 2010-03-02 16:03 # 137872
Faylashaan waxaa laga yaabaa inay musuqmaasuq yihiin ama aan dhameystirneyn, laakiin waxaan nasiib u yeelan karnaa oo aan heli karnaa wixii aan u maleyneynay inuu lumay ka dib fsck Waxaan u baahanahay inaan dib u eegno feylasha iyo tilmaamaha mid mid sababtoo ah magaca faylka ayaa lumay. Waxay noqon kartaa hawl adag in la maro dhammaan faylasha iyo tusaha oo la isku dayo in dib loogu celiyo meeshoodii, mararka qaarkoodna waxay noqon kartaa mid aan macquul aheyn.
fsck (hubinta nidaamka faylka ama hubinta isku xirnaanta nidaamka faylka): waa koronto shaqadeedu tahay inay xalliso iswaafaq la'aanta nidaamka faylka, maaddaama ay saxdo khaladaadka suurtagalka ah ee nidaamka. fsck si otomaatig ah ayuu ugu shaqeeyaa bilawga nidaamka marka uu fashilmo, laakiin sidoo kale waxaa gacanta u isticmaali kara maamulaha nidaamka si uu ugu qasbo jeeg.
Marka waad ogtahay, si fiican ubarasho, in berri uu jiro imtixaan XD ah ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Sidee tusaaluhu ugu dhisan yihiin GNU / Linux?
Aad u faa'iido badan in lagu helo faahfaahin yar oo faahfaahsan waxa ururka Linux u eg yahay, mahadsanid!
Ma iga caawin kartaa meelaha ay galka ku jiraan ereyada sirta ah ee isticmaalaha lagu keydiyo Ubuntu
/ iwm / hooska
laakiin ereyada sirta ah ee la muujiyay waxay u muuqdaan kuwo sir ah
Jawaab Joaquin JH
Shaqo fiican @Perseo
Hambalyo Perseus, shaqo fiican !! 🙂
Tuto aad u fiican, waxay ahaan laheyd wax aad u wanaagsan, suurtagalnimadaada, inaad ku dhex dhigto PDF gudaha madasha Casharrada. +1.
Had iyo jeer waad isticmaali kartaa http://www.printerfriendly.com loogu talagalay
+10 !!!! Cajiib, waxaan uun ku daray sheyga kuwa aan ugu jeclahay. sharax cad oo ku saabsan qaab dhismeedka Linux. Ma aanan ogeyn inbadan oo waxyaalahan ah !!!!
Perseus waa run. Maqaal aad u fiican 😀
Si daacadnimo ah, sidoo kale waxaan waxbadan ka bartay maqaalkan ... la yaab leh sida wanaagsan ee loo sharaxay waa, Perseus runtii isagu haddiyad buu u leeyahay tan O_o
Horay u cadeeyay
koronto 22 dijo
Aad u fiican, aad ayaad u mahadsan tahay 😀
Dhamaantiin waad ku mahadsan tihiin faallooyinkiina 😀
Kama sameyn kartid PDF macluumaadkan waa in lala wadaago 😀
Dabcan waan sameyn doonnaa, kaliya wax yar i sii (Dhowr jeer ayaan shaqooyin haystaa: D) waana ku faraxsanaan doonaa
Waan sugayaye 😀
Sharaxaadda waa mid aad u fiican. Maqaal aad u wanaagsan.
Lama Garaaci Karo 😉
Aad baad ugu mahadsantahay maqaalkan, Perseus. Macluumaadka noocan ah waxay si weyn u kobcinaysaa barta, maaddaama oo kaliya ku saabsan wararka ama muujinta sida wax loo qaabeeyo, laakiin ku saabsan wax badan oo ku saabsan nidaamkayaga hawlgalka. Shaki la'aan hadda waxaan ka ogahay wax yar oo ku saabsan waxyaabo aan marwalba doonayay inaan ogaado markii aan la kulmay "feylasha" faylashaas oo aan ii oggolaan doonin inaan isbeddelo maxaa yeelay ma aanan ahayn "xidid", ha ha ha.
Aad baad ugu mahadsantahay faallooyinka saaxiib, waxaan isku dayi doonaa inaan sii wadno hagaajinta: D.
PS: Waan ka xumahay dib u dhaca, laakiin waxaan ku tijaabinayaa kombuyuutarkayga diro kale.
Ma ogtahay amar kasta oo ku qasbaya codsi ka baxsan nidaamka inuu isagu iskiis u rakibo halkii uu ka dooran lahaa nidaamka faylka?
Si aad ah ayaa loo sharaxay, waxaan aakhirkii fahmay sababta markii aan u isticmaalay Slax's cd live, oo ku saleysan Slackware, waxaan waxyaabo ugu dhejiyay mnt ee maahan warbaahinta. Salaan.
Maqaal aad u fiican, aad u dhameystiran, waad ku mahadsan tahay wax ku biirinta.
Pdta. Xeerarka Sonata! 😛
Aad u fiican. Waad ku mahadsan tahay maalgashiga.
Maqaal aad u wanaagsan, aad baad ugu mahadsantahay macluumaadka!
Ku jawaab jeodriht
Waad salaaman tahay, waa suurtagal in lagu soo dejiyo hagahan pdf ama doc si aad u daabacdo si aan ugu aqrisan karo si deggan meel kasta, haddii ay suurtagal tahay, i sii xiriiriyaha, ka dib aad baad u mahadsan tahay
Ku jawaab jeronimoacero
Waxaad si toos ah ugu daabacan kartaa isla isla boggaga, ama waad keydin kartaa boggan (Faylka-Keyd) ka dibna ku daabac guriga.
Waxaan rajeynayaa inaan ku caawiyey 😉
Salaan iyo ku soo dhawow barta.
runta ayaa ah tan ugufiican ee la diiwaan galiyay oo la soo koobay waxaan arkay hambalyo aan u dirayo abuuraha maqaalkan
Waad ku mahadsantahay wax ku biirintaada !!! Waxay ku timaaddaa mid waxtar leh si loo ogaado waxa socda!
Buugga / dev / diiwaanka ayaa ka buuxa faylal, kuwaas oo tilmaamaya aaladaha "ma aha wadayaal" (dekedda taxanaha ah, isbarbar yaaca ah, muuqaalka ama fijigyada wadaha ah ee diskiga ah ... blah, blah, blah) inta hartay, oo aad u wanaagsan !!!
Ku jawaab kann
Waad salaaman tihiin, aad baad ufiican tihiin dhamaantiin, talo saaxiibkey waxaan u imid degelkan quruxda badan waxbadanna ka barto Linux, wali shaki badan ayaa iiga jira waxaan u maleynayaa in la ii isticmaalay daaqadaha, laakiin markaan arkay kombiyuutarka saaxiibkey waan yaabay Waxaan jeclaan lahaa inaan inbadan ogaado.
Guys way ogyihiin daaqadaha waxaa ku kala qeybsanaan macquul ah (disk C, disk D) oo Linux ah sideen ku sameyn karaa taas maxaa yeelay ka fiiri daaqadaha hadii wax dhacaan waan tirtiray C ka dibna adoo adeegsanaya keyd aan ku keydiyey D waxaan ka soo kaban karaa halkii aan ka heli lahaa Linux ma garanayo sida ay tahay Gebi ahaanba waan lumay
Hagaag waxaan rajaynayaa inaad i caawiso fadlan, waan jeclahay Linux waanan jeclaan lahaa inaad i caawiso.
Hagaag, waxa ugu horeeya ee aasaasiga ah waa inaad rabto inaad waxbarto, oo sida muuqata waxaad heysataa taas wax kuuboran Taladaydu waxay tahay inaad akhriska bilowdo maqaalkan iyo xiriiriyeyaasha aad ka heli karto.
Si kastaba ha noqotee, inaad sameyso wax la mid ah Windows-ka wax waliba waa sahlan yahay, waa inaad u kala soocdaa qeybta / guriga. Laakiin sidaan sheegayay, haddii aadan wax fikrad ah ka haysan Nidaamka Faylka ee ku jira GNU / Linux, Waxaan qabaa inaad kubilaabato maqaalkaas 😉
Aad baad u mahadsan tahay, waad ogtahay inta aan wax aqrin karayay, kaliya waxaan ogaaday inay yihiin wax qeybin, runti waan jeclahay kubuntu, dad kale waan arkay laakiin magaca ayaa ila muuqda aniga .. .. <Waxaan bilaabi doonaa inaan qaato talaabooyinka ugu horeeya 🙂 mahadsanidiin marar badan, waxaan ka faalloon doonaa sidaan ula shaqeynayo Linux.
Doorasho aad u wanaagsan ^ _ ^
Tababar aad ufiican, haa mudane. Waxay muujineysaa inaad ka shaqeysay. Kuwa aan waxbadan fahmin waxay u noqon doontaa caawinaad weyn iyo kuwa aan aad ugu sii dheereyno waxay u noqoneysaa xusuusin wanaagsan oo wanaagsan in la akhriyo.
Subax wanaagsan, runtii waan ka helay qoraalkaaga. Shaki ayaan qabaa:
Sideen ugu keydin karaa feylasha galka xididka? Taasi miyaa / gurigu mar hore buu buuxsamay waxaanan rabaa inaan ogaado haddii / buugga loo isticmaali karo inuu lahaado meel badan, waxaa jira in ka badan 20 Gb oo aan doonayo inaan ka faa'iideysto. Ma jecli lahaa inaan dib u cabbiro qaybaha. Waad ku mahadsantahay kaalmadaada.
Ku jawaab Goku
Maqaal aad u wanaagsan, hambalyo oo sii wad, waan ku raacayaa oo ha iloobin inaan marwalba kugu casuumayo inaad ogaato BSD (nidaamka qalliinka)
Shaqo aad u fiican, si aad u wanaagsan ayaa loo sharaxay. Mahadsanid…!
Aad ufiican midka ugu dhameystiran ee aan awoodo inaan akhriyo ilaa maanta.
Waa salaaman tahay, waxaan ku weydiinayaa waxa uu ka kooban yahay lambarka Linuxuser oo aan ku soo arkay bogag internet oo kala duwan. Waad ku mahadsantahay jawaabtaada kahor.
Wanaagsan !! Waxaan hayaa Huayra shabaggayga iskuulka oo way ka fiican yihiin Windows. Macluumaadku aad ayuu ii anfacay. Waad ku mahadsantahay wadaagista !!
Jawaab Alejandra Diel
Mahadsanid, shaqo aad u fiican, tani waxay tirtirtay shaki badan waxayna iga caawisay inaan u fududeeyo tilmaamaha adduunka Linux.
Jawaab Simón Valdés
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa qalab ultra ah oo leh qalab isku dhafan waxaana jeclaan lahaa inaan ku rakibo wax walba oo la xiriira bilowga qeybta ssd, waan raadinayay mana aanan helin wax gaar ah laakiin qoraalkaan http://www.linux-es.org/node/112 wixii aan ku qiyaasi lahaa marka hore, waxay noqon lahaayeen / bin /, / boot / iyo / dev / directory.
Maxay kula tahay Farxad!
Aad u fiican, runtu waxay tahay wax laga xumaado in inteena badani aanaan aqoonin waxa noocan ah, xitaa kaba sii badan, annagoo isticmaalaynay Linux muddo dheer. Waxa ugu murugada badan ayaa ah in shan daqiiqo gudahood aan wax walba ku ilaawo. Laakiin aqrinta tan aad ayey iigu fiicneyd aniga. Waxaan ka fekerayay inaan u isticmaalo labo saxan isla qeybinta waana taas sababta aan u raadinayay macluumaadka noocan ah. Tilmaamahan waa qabow.
Maqaal aad u fiican, aad u dhameystiran.
Hadda kadib waxaan raacayaa bartaada
Jawaab MIGUEL SANCHEZ TRONCOSO
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Waxaan ubaahanahay inaan ogaado sida loo sameeyo macluumaadka caawimaad ee codsi QT (C ++) ah oo uu aqoonsado ninka amarkiisu. Ma jiraa qof og meesha ay ku yaalliin feylasha la xidhiidha amarrada Linux ???? Waad ku mahadsantahay horay.
Aad u faa'iido badan, mahadsanid
Su'aashaydu waxay tahay, DOS, nuqul ama guuritaan waxaan u isticmaalaa c: asal ahaan iyo sidoo kale halka loo socdo, wadada laga bilaabo c: \_ mana garanayo meel aan ka bilaabo ???? '
Wax ku darsasho aad u wanaagsan, waligey wax badan kama faalloodo barta iyo waxyaabaha, laakiin shaqadaadu hadda wey fiicneyd, meelwalba waan aqrinayey wax badana waan baranayey ... laakiin tani wax walba uunbay meeshiisa dhigtaa waxaanan u maleynayaa in tijaabadani ay noqon doonto shucuur aad u weyn. .
Tabaruc aad u fiican. Aad baad ugu mahadsantahay macluumaadka !.